Ny lisitry ny lisitry ny festival teknolojia mahomby! | Martech Zone
Ny lisitry ny lisitry ny festival teknolojia mahomby!
Talata, Aprily 29, 2014 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Tamin'ity faran'ny herinandro lasa teo ity dia nodakanay ny voalohany Music, Marketing & Tech Midwest Hetsika (#MTMW) - hetsika iray eto Indianapolis hitadiavam-bola ho an'ny Leukemia sy Lymphoma Society ho fahatsiarovana ny Raiko izay very taminay tamin'ny taon-dasa. Ity no hetsika voalohany nataoko ka nampatahotra tokoa. Na izany aza, nandeha tsy nisy sakana izy ary tiako ny hanome fahitana ny hafa momba ny antony nahombiazany.
Nanapa-kevitra ny hanao a festival teknolojia fa tsy ny antonony, fihaonambe mankaleo mba hahafahan'ny olona miala sasatra sy hifanerasera amin'ny hafa fa tsy ho leo amin'ny tomany amin'ilay Powerpoint ratsy manaraka. Ny mpanatrika dia mbola afaka manana iray isaky ny mandeha miaraka amin'ireo mpanohana hanombatombana ny tolotra omeny… saingy tsy misy ny kabary.
Charity - na inona na inona hetsikao dia afaka manao tsara ianao amin'ny alàlan'ny fiantohana ny vola azo avy amin'ilay hetsika mankany amin'ny fikambanana mpanao asa soa manokana. Raha ny momba anay dia nanolotra 100% ny vola azo izahay ho an'ny fiarahamonina Leukemia & Lymphoma. Nisy aza ny mpanatrika nanangana tetik'asa fitadiavam-bola izay natambatra taminay! Misaotra # run4doug
Sponsors - ny fananana fiantrana dia nahafahanay nivoaka sy nahita mpanohana ny signage, karatra fanomezana, mpiasa, sakafo ary mozika. Niara-niasa tamin'ny mpanohana izahay mba hahitana ny fomba ahafahantsika mitazona fonosana amin'ny vidiny mirary amin'ny alàlan'ny ezaka varotra amin'izy ireo - ary nandaitra!
toerana - mitsikera ny toerana mety. Nifantina ny Rathskeller any Indianapolis - ivon-toerana mahafinaritra an'ny faritra be tanàna izay misy fidirana na aiza na aiza - nanana zaridaina labiera, bara ary efitrano baolina izy rehetra - misy dingana sy feo avokoa hitantanana mozika Teo ireo mpiasa mba hahomby sy mihoatra ny fanantenana rehetra.
Fifandraisana amin'ny vahoaka - Ditto PRniasa tsy niasa nandritra ny volana maro hifandray tamin'ny fahitalavitra, radio, gazety ary haino aman-jery an-tserasera hampiroborobo ny hetsika. Fahombiazana lehibe ny hetsika noho ny ezak'izy ireo!
Social Media - saika isan'andro no navoakanay tao amin'ny tranonkalantsika sy manerana ireo fantsona media sosialy hanohizany ny fitarihana olona ho tonga. Nanao doka koa izahay tao amin'ny Facebook sy Twitter mba hanentanana bebe kokoa. Niara-niasa izahay Paikady momba ny tranokala, manam-pahaizana momba ny fikarohana eo an-toerana izay nampiroborobo ny hetsika tamin'ny lafiny sosialy sy ny anay seho radio marketing.
Music - Maromaro ny mozika isan-karazany… nanomboka tamin'ny Blues ka hatramin'ny Bluegrass ary Folk ka hatramin'ny Jazz no tao. Nanatontosa kaonseritra virtoaly famaritana avo lenta aza izahay tao amin'ny lapan'ny teknolojia avy any rivotra iainana.
Event Management - Steve Gerardi dia mpanentana hetsika eto an-toerana ary nahafantatra izay rehetra nilaina drafitra sy novonoina hatramin'ny antsipiriany rehetra. Tsy nahagaga izy nandritra ny fandaminana sy ny fanatanterahana ny hetsika.
Fisoratana anarana amin'ny Internet - Afaka mandoa vola amin'ny Internet ny mpanatrika ary manana lisitry ny mpitsidika eo am-bavahady izahay, miaraka amin'ny iPad izay ahafahan'izy ireo mandoa amin'ny carte de crédit. Raha tokony tapakila dia nizara izahay fehin-tànana misy loko miloko izay samy manana ny lokony ireo mpanohana, olon-dehibe, ankizy ary tarika mba hahafantarana azy mora foana.
Signage - Nila kojakoja fampiroboroboana, sarintany, valizy karipetra mena hahazoana sary, sora-baventy ary flyer… ary niara-niasa tamina orinasa tsy mampino PERQ hamita ireo.
loka - PERQ programmed ny Kiosks FATWIN amin'ny hetsika ahafahan'ny mpanatrika rehetra misoratra anarana sy mahazo loka. Ity fitomboan'ny fifamoivoizana an-tongotra mankany amin'ny efitrano teknolojika ity sy ny mpanatrika anay dia samy nody niaraka tamin'ny loka!
feo - Tsy azoko atao ny manasongadina ny maha-zava-dehibe ny feo. Miaraka amin'ny fandanjalanjan'ny mozika sy ny olona marina, ny tsirairay dia nahazo fipoahana tamin'ny hetsika nefa tsy dia nitabataba loatra izany. Afaka nanao resadresaka ny olona ary mbola nandre ny talenta mahavariana nilalao tany aoriana. Nidina ambany ny efitrano teknolojia mba hahasarika ny sain'ireo mpanohana. Piramida Sound Works tarihin'i Mike Ottinger nitarika ny feo ary nahagaga!
T-Shirts - Ny Art Press namolavola T-Shirt fahatsiarovana ny fetibe nivarotra (fa mbola azonao atao ny manafatra azy ireo eto amin'ny Internet hatramin'ny 10 Mey). Ny mpiasa dia nanao T-shirt misy STAFF vita pirinty ao aoriana. Ny Art Press dia nanangana latabatra fivarotana ihany koa izay nanaiky ny carte de crédit ary nanangana ny tranokalam-pifandraisana an-tserasera mihitsy aza ny olon-kafa mba hividy akanjo avy eo!
Food & Drink - Mba hampifanoherana ny menio alemana mahavariana dia niditra tamin'ny zava-mahagaga ihany koa izahay New York Pizzeria any an-toerana hijanona eo am-bavahady ho an'ny hetsika ny kamiaon-dry zareo. Nilaza ireo toerana roa ireo fa nahavita varotra mahafinaritra erak'izy ireo… ary noana ny vahoaka! Na dia fisotroana aza ny ampahany amin'ilay toerana, dia azonay ihany koa ny efitry ny baolina raha tsy mahazo aina ny olona misotro.
Toeram-piambenana - Samy manana telefaona ny tsirairay ary mila ampiakarina daholo. Misaotra ho antsika, Powerqube nanolotra paletan'ny charger marani-tenan'izy ireo mahagaga ary afaka naka sary sy nizara azy ireo ny rehetra nandritra ny tontolo andro! Ny bateria maty dia midika fa tsy misy fizarana !!!
Lahatsary sy sary - nampidirinay ny mpaka sary hetsika tsara indrindra any amin'ny fanjakana, Paul D'Andrea. Ary nanananay Isaka Daniel, an mpanao sary an-tsaina nahomby izay manam-pahaizana manokana amin'ny fitantarana tantara dia miaraka amina ekipa, fanangonana fakantsary sy GoPros, ary angovo tsy miato. (Mihombo sy miharo ny horonantsary rehefa manoratra an'ity aho).
Inona no tsy azontsika?
Na dia hetsika nahafinaritra aza izany dia mino aho fa tsy nahita zavatra roa izahay:
Programs - Ny programa mini dia mety ho olona mandray tsara, manome rohy manan-danja, famaritana ireo mpanohana ary fandaharam-potoana ho azy ireo!
Fitsidihana mpanohana - Heveriko fa ny karatra misy endrika bingo izay tsy maintsy andraisan'ny olona tombo-kase isaky ny mpanohana azy mba hahafahany milalao FATWIN dia mety hitarika fifamoivoizana bebe kokoa isaky ny booth teknolojia.
Fanamarihana fotsiny - Voatendry ho an'ny Lehilahy sy vehivavy amin'ny taona fampielezan-kevitra ary mbola azonao atao ihany manome hatramin'ny 10 Mey!
Tags: toakafiantsonan'ny fiampanganafiantranatoy izany koa przava-pisotrohetsikafitantanana hetsikahetsika facebookfestivallisitra fanamarihana festivalsakafomike ottingerMusicprfifandraisana amin'ny vahoakamiasa feo piramidadoka ara-tsosialyfampiroboroboana ara-tsosialyfeosteve gerardiT-shirtt-shirttoerana
Ny ady ho an'ny Inbox
Paikady lehibe amin'ny marketing amin'ny mailaka